Tora Wiricheya Yako, Walker, kana Scooter Kupfuura Yekuchengetedza Airport
Wese munhu, mhuka uye chinhu chinoenda nendege chinoongororwa bhodhi isati yatanga. Izvi ichokwadi kune mavhiripu, vanofamba nezvimwe kufamba midziyo. Saizvozvo, kutakura Security Administration (TSA) maofficial vawana zvakasiyana siyana zvisina kujairika zvinhu zvakavanzwa mukati mavhiripu uye kune vafambi vanozvishandisa, kunge pfuti dzakatakurwa uye bundle dzecocaine. Naizvozvo, iwe paunoshandisa scooter kana wiricheya, iwe neako kufamba midziyo inofanirwa kuongororwa neimwe nzira.
Airport Kuchengetedzeka kune Scooter uye mavhiripu
Kana iwe ukashandisa scooter kana wiricheya uye haukwanise kumira uye kufamba kuburikidza nesimbi sensor, unoongororwa neyako kufamba muchina. Izvi zvinogona kusanganisira zvinoonekwa uye nemuviri (pat pasi) kuongorora uye zvinoputika kuteedzera kuyedzwa. Iyo pat-pasi bvunzo yakakosha sezvo isina simbi sensor kana a yose muchina wekufungidzira muviri unoshanda pane vanhu vakagara muchikoro kana wiricheya. Iwe unogona kukumbira yakavanzika pat-pasi bvunzo; zvirokwazvo haufanire kuita izvi pachena kana zvichikonzera kuti unzwe kusagadzikana.
Iwe uchafanirwa kuisa matengu, zvigaro zvehombodo, wiricheya kumisikidza zvishandiso, zvikwama pamwe chete nekutakura-zvigadzirwa pane iyo x-ray zvishandiso bhandi. Kana izvi zvikakuomera iwe kuti uite, kumbira rubatsiro kubva kune wako wekuchengetedza inspector.
Airport Kuchengetedzwa kwe vanofamba
Your Walker ichave X-rayed kana ikakwanisa kupfuura nemidziyo. Rangarira kuipeta nzira yeX-ray isati yatanga. Vese vanobata kana mabhegi ayo anowanzo dangle kubva kune ako Walker ndinofanira kupfuura nemuchina weX-ray. Inofanira yako Walker kuve wakanyanyisa kukura kuti uve X-rayed, vekuchengetedza screeners vanozoiongorora vakazvimiririra. Unofanira here kuda rubatsiro kusimuka kana kufamba kuburikidza nesimbi sensor pasina yako Walker, bvunza rubatsiro rwekuchengeteka.
Airport Kuchengetedzwa kweKane nemadondoro
Tsvimbo nemadondoro zvinoda kupfuura nemidziyo yeX-ray. Zvakanakisa kupeta tsvimbo yako isati yawana X-rayed. Iwe unogona kukumbira rubatsiro kumira kana kufamba kuburikidza nesimbi sensor. Machena machena anodonha haadi kuve X-rayed.
TSA screeners vanodzidziswa kubatsira vafambi kuburikidza nechengetedzo yekutarisa maitiro nehuremu hwakawanda sezvinobvira. Ivo vanofanirwa kukubatsira iwe kusimuka, kufamba uye kuisa zvinhu pabhandi reX-ray kana ukakumbira rubatsiro. Kana iwe ukakumbira kana uchifanirwa kuongororwa pat-pasi, vanogona kuita bvunzo iyi pasingaonekwe neruzhinji pakukumbira kwako. Izvo zvinokwanisika kukumbira imwechete-bonde chengetedzo screener kune iyo pat pasi uye, chete kana zvisingawanzo mamiriro zvinoraira neimwe nzira, mumwe munhu wako wechikadzi anokutarisa iwe.
Panofanirwa kubuda zvinhu panguva yekuyedzwa kwako, kumbira kuti utaure nemukuru weTSA. Pamusoro pezvo, unogona kutumira email kuTSA kuSAA-ContactCenter@dhs.gov. Kana iwe ukave nezvinetso pakuita ongororo nekuti uri paDhipatimendi reHomeland Security (DHS) yekutarisa runyorwa, unogona kubata One-Stop Vafambi 'Redress Chirongwa paDHS peji rewebhu kugadzirisa dambudziko iri.
Ndokumbira kuti upe ruzivo rwako rwekuonana uye isu tichava nekuonana munguva pfupi.
Makomendi kana Mibvunzo